Mahajanga: tsy misy olana intsony ny Oniversite | Région Boeny
Milamina ankehitriny ny Oniversiten’i Mahajanga, profon’izany ny famoahany ireo mpianatra miisa 452, mizara andiany roa, avy ao amin’ny Ivon-toeram-pampianarana ambony momba ny Fitantanana na IUGM (Institut Universitaire de Gestion et de Management) ny faran’ny herinandro teo, teto Mahajanga.
Ny andiany Volamahitsy izay nivondronan’ireo mpianatra taona faha-2 miisa 319 nahavita ny «Formation Théorique Académicienne» ary nahazo ny mari-pahaizana Technicien Supérieur en Gestion d’entreprise.
Ary ny andiany faharoa Tsarahofana, dia ireo mpianatra taona faha-3 miisa 133 izay nahavita ny Fiofanana arak’asa momba ny Finance-Comptabilité, Ressources Humaines, Progiciel de Gestion Intégré ka notolorana ny mari-pahaizana Licence professionnelle.
Ireo no mpianatra nokolokoloin’ny Oniversiten’i Mahajanga taona iray taloha, nandritra ary taorian’ny krizy nisy teo anivon’ity anjery manontolo eto Boeny ity. Rtoa Profesora Ravolamanana Lisy, Filoha mpanatanteraka vonjy maika ny Oniversiten’i Mahajanga, sy Atoa Profesora Rabesa Zafera Antoine, Filohany teo aloha, samy mpampianatra ao, no reny sy ray mpiahy tsirairay avy ireo andiany roa ireo.
Tsara ny mampatsiahy hoy ny Taleny, fa ny IUGM dia niforona ny taona 2001. Nanomboka tami’izany dia nisedra olana maro samy hafa ny Ivon-toeram-pampianarana. Teo ny tsy fitovian’ny kolontsainan’ny «Anglophone» sy «Francophone» nentin’ireo mpiara-miasa amin’izy ireo, teo ny tsy fitovian-kevitry ny mpandraharaha sy ny mpianatra, sy ny sisa…. Niravona ihany nefa izany taty aoriana hoy izy ka tonga amin’izao vokatra izao.
Nanome voninahitra izao lanonana izao, izay notanterahana tao amin’ny Tranoben’ny kolontsaina eto Mahajanga ny zoma 10 Aprily 2015, ireo manampahefana eto an-toerana notarihin’ny Lehiben’ny Kabinetran’ny Faritra Boeny, Atoa Hemedy.